Rega Munhu Wese Afarire Kunakidzwa NEMITAMBO
Akanakisa emitambo Peripherals 2020& 2021 yeVatambi Vepasi Pose
Kusangana Kwemitambo Yekutenderera
Chinangwa cheMusangano ndechekugutsa vatengi vedu vepasirese nevatambi nehunyanzvi hwepamusoro uye hwakavimbika mhando kuona kuti mutengi wese uye mutambi anogona kunzwa akasununguka uye aine chivimbo nemitambo yedu yekutamba mune avo mashandisiro. Musangano wekutamba mbeva uye keyboard, kana zvimwe zvigadzirwa zvemitambo zvakawana zvakanyanya kunyorera kwavo kubva kumusika nekuda kwenzvimbo dzavo dzakanaka. Ivo vane zvakawanda maficha izvo zvinowanisa kufarirwa uye kushandiswa.
Ergonomic 2.4g waya isina kusimba metical mouse r390 / m390
Item Nhamba N -MT-R390Brand: MeonionRuvara: NhemaKuwanika: MuStockEan: 6970344731868Tsanangudzo: 10m Wireless kugamuchira chinhambwe, ganda-sezvinhu zvinoita kuti ruoko ruchinzwe rakagadzikana
Slim 2.4g Wireless Keyboard Chocolate Computer Computer WK84
Item Nhamba N.MT-WK841Brand: MeonionRuvara: Nhema& chenaKuwanika: MuStockEan: Nhema: 6970344731646 White: 6970344731691Tsanangudzo: Yakazara-saizi Wireless Chocolate Computer Computer
Yakakura Yakawedzerwa Gamer Desk Gaming Mouse Mat P100
Item Nhamba Nhamba :mt-p100Brand: MeonionRuvara: NhemaKuwanika: MuStockEan: 6970344731394Tsanangudzo: Yakakura Yakawedzerwa Gaming Mouse pad
Isiri-Slip Rubber Square Mouse pad P110
Item Nhamba N -MT-P110Brand: MeonionRuvara: NhemaKuwanika: MuStockEan: 6970344731370Tsanangudzo: Waterproof Rubber Mouse pad
Shenzhen Kusangana Tech Co Ltd.
Kubvira payakagadzwa, iyo "Simudzira kuvandudzwa kwesainzi uye zvigadzirwa zvehunyanzvi, simbisa kuvandudza kwesainzi uye tekinoroji sevhisi" anga ari huzivi hwebhizinesi raMusangano. Iyo yakateedzana yemafashoni emitambo zvigadzirwa zvemukati dhizaini& akasarudzika mazano& yepamusoro-pc yemitambo uye komputa zvigadzirwa& zvishongedzo zvakashambadzirwa zvinobudirira pasi peiyo uzivi.
Akanakisa emitambo yekupararira simba rekambani: Kuva nevashandi vanopfuura mazana maviri; Factory nzvimbo inopfuura 10000㎡; Matanhatu akazara otomatiki ekugadzira gungano mitsara; Vanopfuura gumi zvizere akangwara jekiseni Kuumbwa michina; Makomputa emitambo yekutamba uye PC zvishongedzo pamwedzi zvinobuda kupfuura zviuru mazana masere. Isu tinopasa uye tinonyatso shandisa iyo yemhando yepamusoro chitupa sisitimu ISO 9001: 2008. Zvese zvigadzirwa zvemasion zvinopasa chiziviso chepasi rose CE, FCC, RoHS, uye REACH, nezvimwe
Nekuda kwehunhu hwakanaka, hwakakwana mhando uye yemhando yepamusoro dhizaini, yakadzikama rwizi rwezvigadzirwa zvinotengeswa kunze kwenyika kubva kuMEETION kuenda kune dzimwe nyika nematunhu epasi; uye zvakare isu tasimbisa hukama hwakanaka hwekudyidzana pamwe neanozivikanwa makambani eIT pakati pekumba nekune dzimwe nyika.